Mogadishu Journal » Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo galabta la horgeeyay maxkamada gobolka Banaadir
Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo galabta la horgeeyay maxkamada gobolka Banaadir
Mjournal :-Maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa soo gaba gabeysay dhageysiga dacwad ay Xeer Ilaalinta Qaranka ku soo oogtay C/raxmaan C/shakuur Warsame, kadib markii maanta la hor geeyay Maxkamadda gobolka Banaadir.
Xeer Ilaalinta ayaa ku soo eedeysay C/raxmaan dambiyo ay ka mid yihiin qiyaano qaran, inqilaab iyo kuwa kale, hase ahaatee Maxkamadda ayaa dalbatay in caddeeymo loo keeno eedeymahaas.
Sidoo kale Xeer Ilaalinta ayaa dalbatay in muddo 5 maalmood loo siiyo, si ay baaritaanka ku soo dhameystirto, isla markaana ku keento caddeymo.
Hase ahaatee Guddoomiyaha Maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa diiday dalabka Xeer ilaalinta, waxaana uu u qabtay in muddo 24 saac lagu keeno caddeymo, laguna soo dhameystiro baaritaanka eedaha loo heysto
C/raxmaan C/shakuur ayaa waxaa u doodayay qarreeno, kuwaasoo Maxkamadda ka sheegay in qaabkii loo maray xarigiisa ay aheyd mid sharci darro ah, isla markaana aanu wax dambi ah laheyn.
Maalinta berri ayaa lagu wadaa in Maxkamadda la isku soo noqdo, iyadoo laga sugayo Xeer Ilaalinta inay caddeymo u keento eedeymaha ay ku soo oogtay C/raxmaan C/shakuur
Muqdisho oo laga xusayo maalinta Booliiska Soomaaliyeed